नारायणहिटी दरबारबाट श्रीपेच चोर्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ, को हुन् उनि ? — Imandarmedia.com
नारायणहिटी दरबारबाट श्रीपेच चोर्न खोज्ने व्यक्ति पक्राउ, को हुन् उनि ?
काठमाडौ। नारायणहिटी दरबार संङ्ग्रहालयमा राखिएको श्रीपेज चार्न खोज्ने एकजनालाई नेपाली सेनाले नियन्त्रणमा लिएको छ । शुक्रबार बिहान श्रीपेज निकाल्न खाेज्ने ती व्यक्तिलाई सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाले पक्राउ गरेको हो।
नारायणहिटी सङ्ग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले श्रीपेज निकाल्न खोज्ने व्यक्तिलाई निर्यन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। बिहान अवलोकन गर्ने पुगेका पश्चिम रुकुम मसिकोट ११ का खिमबहादुर घर्तीले सिसा फुटाएर श्रीपेज निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । सिसा फुटाउँदा उनको हात समेत काटिएको छ।
नौ महिनापछि खुलेको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय दस दिनमा २ हजार ६ सय २२ जनाले अवलोकन गरेका छन् । तीमध्ये सार्क मुलुकका दुई र अन्य मुलुकको एक जना मात्र छन् ।नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा राखिएको तत्कालीन राजाको श्रीपेच ।
कोर क्षेत्र भने अझै पनि सेनाकै कब्जामा छ । दक्षिण मूल गेटदेखि पश्चिम राहदानी विभागसम्मको सुरक्षा गुल्मले हेर्ने गरेको छ । “भित्री भागमा हाम्रो उपस्थिति छैन,” प्रहरी निरीक्षक राजभण्डारी भन्छन्, “नामचाहिँ नारायणहिटी सुरक्षा छ, कामचाहिँ राहदानी सुरक्षा भइरहेको छ ।”
सेनाका कारण सकस
नारायणहिटीमा रहेको सेनाको ब्यारेक सुरक्षाको विषयमा मात्रै सीमित छैन । संग्रहालयसँग पनि द्वन्द्व बढेको छ, सेनाको । त्यहीँको ब्यारेकसमेत विस्थापित गर्ने पक्षमा रहेको संग्रहालय सेनाले थप जग्गामा दाबी गरेपछि झनै झस्किएको हो । सिंहदरबारमा रहेको सेनाको घोडचढी पल्टन र ब्यान्ड गुल्मलाई नारायणहिटीमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भएपछि संग्रहालयको मौलिकता गुम्ने भन्दै संग्रहालय कार्यालयले यसको विरोध गररिहेको छ । सेनाले नारायणहिटीमा थप १ सय ७४ रोपनी जग्गासमेत मागेको छ ।
२ असार ०६५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारायणहिटी दरबार क्षेत्रलाई ऐतिहासिक संग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने निर्णय त गर्‍यो तर घुम्न जानेहरूले अहिलेसम्म नारायणहिटीका महत्त्वपूर्ण पाटो हेर्न पाउँदैनन् । नारायणहिटीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र नेपाली सेनाले ओगटेको छ । सेनाकै नियन्त्रणका कारण दरबारका कतिपय कुरा आगन्तुकलाई संग्रहालयले देखाउन पाएको छैन ।
साना-ठूला गरी झन्डै आधा दर्जन हेलिकप्टर बस्न सक्ने क्षमताको हेलिप्याड नारायणहिटी घुम्न जाने सर्वसाधारणले हेर्न पाउँदैनन् । त्यो हेलिप्याड सेनाको तालिम गर्ने थलोमा परिणत भएको छ । राजा तथा राजपरिवारको सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने फायरङि रेन्ज पनि सेनाकै अधीनमा छ । “दरबारको सुरक्षा कसरी हुन्थ्यो भन्ने सुरक्षाको मोडालिटी सर्वसाधारणलाई देखाउन मिल्ने गरी मात्रै सेनाको उपस्थिति बनाउनुपर्छ । ब्यारेक नै राख्नु जरुरी छैन,” संग्रहालयका प्रमुख कार्की भन्छन् ।
ठाउँ छाड्नु त टाढाको कुरा भो, सेनाले नयाँ भौतिक संरचनासमेत थपेको छ नारायणहिटीभित्र । आठ-आठ कोठे दुईवटा एकतले भवन निर्माण केहीअघि मात्रै सकिएको छ । ७ ससंग्रहालयलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले गठन गरेको नारायणहिटी संग्रहालय गुरुयोजना तयारी समितिलाई समेत सेनाले ६ महिनासम्म राय-सल्लाह दिएन । ०६९ फागुनमा सरकारले ०७० सालभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरेको थियो
। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकमा समितिले ६ महिनाअघि राय प्रतिक्रिया दिन नारायणहिटी दरबार क्षेत्रको नक्सासहित सेनालाई दिएको थियो । तर पनि सेनाले जवाफ दिन त परै जाओस्, नक्सासमेत गायब बनाइदिएको संग्रहालय प्रमुख कार्की बताउँछन् । सेनाले वास्ता नगरेपछि समितिले सेनाको असहयोगसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गररिहेको छ । “सेनाको व्यवहारले नै समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन,” कार्की थप्छन्, “यी सबै कुरा समेटेर गुरुयोजना बुझाउने तयारीमा छौँ ।